संगीतकार नै गीतको पहिलो गायक - चर्चामा - साप्ताहिक
संगीतकार नै गीतको पहिलो गायक
यतिबेला सांगीतिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहस छेडिएको छ । गायक–गायिकाले गीतकार तथा संगीतकारलाई उचित सम्मान दिन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै सुन्न थालिएको छ । गीतको वास्तविक सर्जक गीतकार तथा संगीतकार भए पनि गायक–गायिकाले कन्सर्टमा प्रस्तुत हुँदा आफ्नो नाम समेत उच्चारण नगर्ने गुनासो गीतकार तथा संगीतकारहरूको छ । रोयल्टीे त अझ परको कुरा भयो । यही पृष्ठभूमिमा यतिबेला संगीतकारहरू आफ्नो सिर्जनामा आफैंले स्वर प्रदान गर्न थालेका छन् । राजनराज शिवाकोटी, कालीप्रसाद बाँस्कोटा, चेतन सापकोटा, वसन्त सापकोटा, ताराप्रकाश लिम्बू आदि संगीतकार गायकका रूपमा समेत
स्थापित हुन थालेका छन् । यद्यपि यीमध्ये केही संगीतकार पहिलेदेखि नै गायक तथा संगीतकारको समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । कालीप्रसाद बाँस्कोटा संगीतकार मात्र होइनन्, गायक तथा गीतकार पनि हुन् । उनी आफ्ना अधिकांश सिर्जनामा आफैं स्वर दिन्छन् अनि शब्द रचनासमेत गर्छन् । उनले संगीतबद्ध गरेका तथा गाएका थुप्रै गीत लोकप्रिय भएका छन् । एकातिर संगीतकारले गीत गाउने ट्ेरन्ड प्रारम्भ भएको छ भने अर्कातिर केही गायक–गायिकाले त्यसमा अप्रत्यक्ष असहमति पनि जनाउन थालेका छन् । यही प्रसंगमा साप्ताहिकले गायक तथा संगीतकार बाँस्कोटासमक्ष के संगीतकारले गीत गाउनै नहुने हो ? भन्ने जिज्ञासा राखेको थियो । बाँस्कोटाको जवाफ छ– ‘हरेक गीतको पहिलो गायक संगीतकार नै हो । यो चर्चा तथा विवाद गर्नुपर्ने कुरै होइन । चर्चा गर्नु नै पर्ने कुराचाहिं हरेक गीतमा संगीतकार तथा गीतकारको भूमिका अनि रोयल्टिको हो ।’
यही प्रसंगमा गीतकार राजेन्द्र थापाले फेसबुकमा लामै स्टाटस लेख्दै भनेका छन्– ‘कुनै पनि गायक–गायिकाले स्टेजमा प्रस्तुति दिँदा बिना शब्द तथा लय गाउन सक्दैन । हरेक प्रस्तुतिमा आयोजकले रोयल्टीबापत निश्चित रकम गीतकार तथा संगीतकारका लागि छुट्याएर रोयल्टी समाजमा तथ्यांकसहित पठाउनुपर्ने कानुन छ । यद्यपि रोयल्टी समाजले केही गर्न सकेन । त्यतिबेला सम्म गायक स्वयंले हरेक शोबाट रोयल्टी काटेर किन दिन सक्दैन अथवा गायकहरूको प्रस्तोता समाजले संकलन गरेर गीतकार–संगीतकारलाई नियमित रुपमा किन रकम उपलब्ध गराउन सक्दैन ?’
गीतकार थापाले विगत ८–१० वर्षदेखि संसारभर स्टेज थर्काइरहेका गीतमध्ये केही गीत आफ्ना समेत भएको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्– ‘न त मैले, न त संगीतकारले ती गीतबाट एक कौडी पाएका छौं, न त आभार नै । न त रेकर्डिङ गर्ने बेलाको पारिश्रमिक नै ।’ गीतकार थापाले आफ्नो शब्दमा तयार भएका गीतमध्ये राजेशपायल राईको दर्शन नमस्ते, प्रमोद खरेलको याद गर्न पनि, शिव परियारको क्या दामी भो, प्रल्हाद तिमिल्सिना र मिलन अमात्यको गाला रातै, यम बरालको दिलमाया, देविका बन्दनाको मन चंगा भो आदि गीतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ती गीतले स्टेजबाट कमाएको रकमबाट आफू तथा संगीतकारले एक पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
थोरै संगीतकारले आफैं गीत गाउन थालेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गीतकार थापाले संगीतकारले नै स्टेज शोबाट गीतकारलाई रोयल्टी दिने कामको थालनी गरेर गायक–गायिकालाई पैसा दिन बाध्य बनाई अन्तत: गायकले नै गाउने, संगीतकारले संगीत दिने तथा गीतकारले गीत रचना गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
संगीतकार वसन्त सापकोटा आफ्नै स्वरमा गीत गाएर गायक बनेपछि संगीतकारहरू गायक बन्न थालेको चर्चा चुलिएको हो । संगीतकार अर्जुन पोखरेल पनि अचेल चलचित्रका गीतमा सुन्न थालिएका छन् । राजनराज शिवाकोटी त संगीतकारका साथै गायकका रूपमा समेत लोकप्रिय छन् । आखिर संगीतकार गायक बन्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ? संगीतकार वसन्त सापकोटाले अनलाइनखबरलाई त्यसका तीनवटा महत्वपूर्ण कारण बताएका छन् ।
संगीतकार सापकोटाका अनुसार अहिले गायक–गायिका भन्दा मेलोडी तथा शब्द चलेको हो । ‘गायक–गायिकामा जसलाई राख्दा पनि गीत चल्ने अवस्था छ, संगीतकार सापकोटाले भनेका छन्– ‘कन्सर्टमा गायक–गायिकाले संगीतकार तथा गीतकारको नामसम्म लिँदैनन् । किन उनीहरू हाम्रो नाम लिन आवश्यक मान्दैनन् ?’ संगीतकार सापकोटाले भनेका छन्– ‘एउटा गीत तयार पार्न गायक–गायिकाको मात्र भूमिका हुँदैन ।
त्यसको पछाडि लगानी गर्ने निर्माता, गीतकार तथा संगीतकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । गायक–गायिका विश्व घुमेर लाखौ कमाउँछन्, तर त्यो गीतको पछाडिका सर्जकहरू सधैं मरिरहनुपरेको छ । गायक–गायिकाले गीतका सर्जकलाई एक प्रतिशत पनि रकम दिन आवश्यक सोचेका छैनन् । गीत गाउँदा पनि पैसा लिने गायक–गायिकाले बाहिर गएर पनि मनग्य पैसा कमाउँछन्, तर त्यो गीतको सर्जकलाई केही प्रतिशत रकम किन छुट्याउन सक्दैन ?’
मसँग गीतको भकारी नै छ
अघि–अघि सुन्दरमणि, पछि–पछि विष्णु माझी पुस २७, २०७५
डिभोर्स सार्वजनिक पुस २७, २०७५
द भ्वाइस अफ नेपालका टप ४ पुस ९, २०७५